मानसिक रोगी युवती गर्भवती भएपछि…. – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २७ श्रावण सोमबार १८:४२
एजेन्सी, बुटवल। मेरो (गोसाँ) मेरा श्रीमान पैसा कमाउन लाहुर जानुभएको छ ।मैले कसरी पेट बोँके ? उनले भन्ने गरेकी छन् ।तर उनी पेट बोकेर पनि सुत्केरी हुने अवस्थामा पुगेपछि अहिले गुल्मीको जिल्ला अस्पताल तम्घास ल्याइएको छ। उनी अविवाहित हुन् । अन्दाजी २५ बर्षीया उनी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकावडा नम्वर ११ सिमीचौरकी अविवाहित युवती रुमकली नेपाली (नाम परिवर्तन) हुन् ।उनी अत्यन्तै विपन्न परिवारकी भएकोले आफ्नै खर्चमा प्रसुति गराउनका लागि अस्पताल लिएर आएको त्यस वडाका वडाध्यक्ष खुमबहादुर रानाले बताए ।
PREVIOUS Previous post: विदेश पठाउँदा लागेकाे पैसा नतिरेकाे भन्दै म्यानपावरका एजेन्टले डोजर लगाएर घर भत्काइदिए !
NEXT Next post: पर्यटन : नेपाल वायुसेवा निगमले जापानको ओसाकामा नियमित उडान गर्दै